Xoghayaha guud ee QM iyo Farmaajo oo ka hadlay Abaaraha dalka Jira [Sawiro] | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Xoghayaha guud ee QM iyo Farmaajo oo ka hadlay Abaaraha dalka Jira...
Xoghayaha guud ee QM iyo Farmaajo oo ka hadlay Abaaraha dalka Jira [Sawiro]
Xoghayaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Guterres oo manta soo gaaray magaalada Modisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa kuu kalan la qaatay madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo looga hadlayay arrimaha Abaaraha iyo amniga.
Kulanka ka dib shir jaraa’iid ay ku qabteen gudaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Magaalada Moqdisho, ayaa xog-hayaha guud ee QM Antonio Guterres waxaa uu caalamka ugu baaqay in Soomaaliya ay la soo gaaraan gargaar deg deg ah si loo badbaadiyo malaayiinka qof ee Soomaaliyeed oo abaartu ay saamaysay.
“Adduunku waa inay falcilin rasmi ah la yimaadaan. Taageerada beesha caalamka hadii la helo Soomaaliya waa ay ka gudbi kartaa walibana nabad waa ay gaari kartaa nabad” ayuu sheegay xoghayaha guud ee QM Antonio Guterres.
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in dowladdiisa ay muhiimadda koowaad siinayso sidii loo gargaari lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay weheliyaan Xoghayaha guud ee QM, safiirka Soomaaliya u qaabilsan QM Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa shirka madaxtooyada ka dib u ambabaxay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobalka Baay.
In ka badan 196 qof ayaa Soomaaliya ugu geeriyooday sababo la xiriira abaaraha iyo cuduro ka dhashay sida cudurka Shuban biyoodka.
110 qof ayaa shuban dartiis ugu geeriyootay gobalada Baay iyo Bakool inta lagu guda jiro bishan maarso ee sanadkan 2017 ka.
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa horey ugu dhawaaqay in abaarta dalka ka jirta ay tahay musiibo qaran.
Qaramada Midoobay ayaa waxaa ay horay u sheegtay in 5.5 milyeen oo soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah ayadoo kumanaan carruur ah ay la il daran yihiin nafaqo darro.
Previous articleWasiirada arrimaha dibadda dalalka Carabta oo ku shiraya Qaahira
Next articleMaalinta Haweenka Adduunka oo maanta ku beegan